Foara any Jaipur, Inde : efa nahitana famandrihana ny vatosoa avy eto Madagasikara | NewsMada
Foara any Jaipur, Inde : efa nahitana famandrihana ny vatosoa avy eto Madagasikara
Nisokatra, ny 8 janoary mifarana anio, any Jaipur, Inde, ny foara iraisam-pirenena momba ny vatosoa « India Rough Gemstones show ». Ankoatra ieo firenen-kafa, firenena afrikanina maro mandray anjara amin’izany, toa an’i Tanzania, i Zambia, i Etiopia, ary nomena toerana manokana i Madagasikara. An’i Madagasikara avokoa ny tranoheva 16 hampirantiana ireo karazana vatosoa avy eto amintsika amina tranoheva 27.
Ny andro voalohany, efa nahitana famandrihana ny vatosoa avy aty Madagasikara. Mifandray mivantana ny mpivarotra sy ny mpividy. Tombony hita amin’izay ny fahatsaram-bidin’ny vokatra entin’izy ireo sy ny fihatahana amin’ny mpanelanelana. Efa tojo ny 75 % amin’ny tanjona kendrena, raha ny filazan’ny CNM azy. “Manohana ny CNM hatrany amin’ny ezaka ataony manampy ireo mpitrandraka madinika ny minisitera”, hoy ny tale kabinetran’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany, Bezokiny Jacky, solontenan’ny minisitera, miaraka amin’ny CNM (1), IGM (2) sy BCMM (3).
Tompon’antoka amin’izao fandraisan’i Madagasikara anjara izao ny CNM, komitim-pirenena misahana ny vatosoa ifandraisan’ny fanjakana sy ny mpandraharaha madinika. Misy 46 ireo mpandraharaha ireo avy amin’ny faritra maro eto amin’ny Nosy mandray anjara amin’izany foara izany, sehatra iray ho azy ireo hitadiavana lalam-barotra sy mpiara-miombon’antoka any ivelany. Manana toerana lehibe momba ny harena an-kibon’ny tany i Jaipur, koa tokony hahitan’izy ireo mpiara-miombon’antoka sy lalam-barotra.
Nomanina ireo mpandraharaha madinika
Ela ny nanomanana ireo mpandraharaha madinika hiditra amina sehatra iraisam-pirenena toy izao, nampitana izay tokony ho fantatra rehetra eo amin’ny lafiny lalàna, ny tontolo ankapobeny sy ny fifandraisana amin’ny raharaham-panjakana. Nampitaina amin’izy ireo koa ny fomba fitadiavana lalam-barotra eto an-toerana sy any ivelany, hahamatihanina azy ireo na vao sambany aza ny maro ny mivoaka any ivelany.